Ungamisa kanjani iWindows Media Player Ukuqhaqhazela ku-Mode Yesikrini Esigcwele
Indlela Yokuvimbela iWindows Media Player Ukushayela
Amathiphu okuxazulula izinkinga ukuxazulula i-WMP iqhwa futhi iphazamise
Izinkinga Uma ushintsha iWindows Media Player ku-Full Screen Mode?
Enye yezinzuzo zeWindows Media Player (WMP) ukuthi ingabonisa amavidiyo kwimodi yesikrini esigcwele. Uma ujwayele i-WMP, cishe uzobe ususebenzise kakade ukubukela amavidiyo omculo njengesibonelo njengokuthi ubheka kuzo ku-TV yakho. Imodi yesikrini esigcwele iyasiza futhi uma ufuna ukusebenzisa izibukiso zeWMP ngenkathi ulalela umtapo wakho womculo.
Kodwa-ke, njengezinhlelo eziningi zesofthiwe, kungase kube nezinkinga nge-WMP uma ushintsha kule modi yevidiyo ekhethekile. Uhlelo lwe- software lwe- jukebox software lwe-Microsoft lungafakazela noma luphele ngokuphelele. Isizathu salokhu singahlukahluka, kodwa ngokuvamile kuvele iphutha lekhadi lehluzo lekhompiyutha yakho elingavumelani nale meyi.
Zama Ukubuyekeza Umshayeli Wekhadi Lakho Lemifanekiso
Njengoba kushiwo ngaphambili, imbangela enkulu yale nkinga yinkinga nomshayeli wekhadi lakho lemifanekiso. Umshayeli wamanje ofakwe ohlelweni lwakho ungahle ube yisikhathi noma aqukethe amabhugi njengesibonelo. Ungase ube nomshayeli wekhadi levidiyo ejwayelekile esikhundleni salowo ovela kumkhiqizi wekhadi. Uma kunjalo-ke umshayeli okwamanje ofakwe ohlelweni lwakho lwe-Windows kungenzeka ukuthi angasebenzi emsebenzini wokusekela zonke izindlela zevidiyo.
Uma ungaqiniseki ukuthi ungabheka kanjani umshayeli wevidiyo efakwe ku-Windows, bese ulandela lezi zinyathelo:
Gwema ikhi ye- Windows ekhibhodi yakho bese ucindezela u- R .
Thayipha i- devmgmt.msc ebhokisini lombhalo bese ushaya ukhiye wokungena / wokubuyela .
Kumphathi weDivaysi, ukwandisa isigaba se- adapters sokubonisa ngokuchofoza + eceleni kwayo.
Chofoza kabili igama lomshayeli.
Chofoza ithebhu yomshayeli . Manje uzobona ulwazi mayelana nalo, kufaka phakathi inombolo yenguqulo.
Ungazama futhi ubuyekeze umshayeli usebenzisa iWindows, kodwa indlela engcono kakhulu ivela kuwebhusayithi yomkhiqizi. Uma kukhona inguqulo yakamuva kakhulu etholakalayo, bese ulanda bese uyifake ukuze ubone ukuthi lokhu kuyimbangela eyinhloko ye-WMP yokuqandisa noma ukuphazamisa.
Shintsha i-Windows Registry
Uma le ndlela engenhla ingasebenzi ke ungase ufune ukuzama i-Hack Registry. Lokhu kuguqulwa ku-Windows Vista eqhuba iWindows Media Player 11. Noma kunjalo, kungase kudingeke uzame uma unayo i-Aero Glass ekhutshaziwe kwi-Windows / WMP ehlukile.
Ukuze usebenzise le hack, landela lezi zinyathelo:
Gwema ikhi ye-Windows bese ucindezela u- R .
Ebhokisini lombhalo elivela, thayipha ku- regedit bese ushaya ukhiye wokungena / wokubuya .
Zulazula endleleni elandelayo yokubhalisa: HKEY_CURRENT_USER \_ SOFTWARE \_ Microsoft \_ MediaPlayer \_ Izintandokazi
Ku-Registry Editor, chofoza ithebhu yemenyu yokuhlela .
Khetha I- New > DWORD (32-bit) Inani .
Thayipha i- DXEM_UkudlulaImvamisa ebhokisini lombhalo ukubiza inani elisha lokubhalisa bese ushayela ikhi lokufaka / lokubuyela .
Chofoza kabili ohlwini lokubhalisa olusha olusanda kudala, bese uthayipha ngenani le- 2 kwenkambu yedatha.
Chofoza OK ukuze ulondoloze.
Ungakwazi manje ukuphuma ku-Registry Editor ngokuvala iWindows noma ngokuchofoza ifayela > Phuma .
Manje sebenzisa iWindows Media Player futhi bese ushintsha kwesikrini esigcwele ukuze ubone ukuthi lokhu kuxazulula inkinga.
Ukulimaza i-Windows Media Player 12 Ukufakwa?
Uma usebenzisa i-WMP 12, kungenzeka ukuthi iphutha lingenxa yefayela lohlelo olonakele endaweni ethile. Izindaba ezinhle ukuthi kulula ukuvuselela ukufakwa. Ukuze uthole ulwazi oluthe xaxa mayelana nendlela yokwenza lokhu, landela umhlahlandlela wethu ekukhipheni nasekufakeni kabusha i-Windows Media Player 12 .
I-FCP 7 Isifundo - Ukusebenzisa ama-keyframes
Indlela Yakha i-MP3 CD ku-Windows Media Player 11
Usebenzisa i-VLC Media Player ukuqondisa ngokuqondile izingoma ezivela ku-Jamendo
Ukusebenzisa i-Spotify ne-Slacker kwi-IPod Touch yakho
Indlela yokulungisa i-WMP Database Eqondayo: Ukubuyisela Umculo
Indlela Yokufinyelela nokusebenzisa i-Samsung Apps Ku-Samsung Smart TV
Ukwengeza ngokuzenzakalela i-albhamu yomculo ku-WMP 12
Indlela Yokwakha Uhlu Lokudlalwayo Usebenzisa i-Winamp
Uhlu lwezinhlelo ezikhulu ze-Cover Free Design Design ze-CD ne-DVD Cases
Ukuphakama kwezizwe: Izihlalo zobukhosi namaPatritio Ukukhohlisa Amakhodi we-PC
Funda indlela elula yokukopisha nokunamathisela izitayela zombhalo ku-Mac
I-Sony STR-DH830 I-Receiver yasekhaya yaseshashalazini - Ukubuyekezwa komkhiqizo
I-iPad Best Best Yonke Isikhathi
Indlela Yokusika Inkambo Nokukhansela I-Cable Cable
Yenza noma Hlela ama-Dorms ku- "The Sims 2: University"
Indlela yokususa izithombe kusuka ku-Photo Stream
I-Minecraft: Ukubukezwa Kwesikhwama sePhuphu ye-Skinfire
Indlela yokulungisa Umsebenzisi32.dll Akutholakali noma Ulahlekelwa Iziphambeko
Ukulungisa Iphutha 'Ayikho Iphutha Lokutholakala Kwenethiwekhi YeSofthiwe.'
Ukuphrinta ikhasi leWebhu
Indlela Yokusetha I-Cryptocurrency I-Wallet Ngaphakathi I-Centralized Exchange
Izikhulumi Zomsindo, I-Bipole, ne-Dipole Surround Sound
I-HP's Envy 5660 e-All-in-One Printer
I-TV E-10 Enhle Yokuthenga ngo-2018
Izinqamuleli ezihamba phambili ze-Android Okufanele Usebenzise
Indlela Yokucwaninga I-Desktop Memory Module
Uhlu Lwaziswa & Ukwaziswa Ngalunye I-iPhone Carrier Carrier
Ngifaka kanjani i-iPod yami ku-PC yami?
Ikhaya le-Google ne-Google Home Mini: Yikuphi okudingayo?
I-Bellroy Elements Hambayo Wallet Inkulu Emidlalo Yaphandle